China Laryngeal Mask Airway ho an'ny orinasa tokana sy mpanamboatra | Kangyuan
• Silika kilasy 100 for ho an'ny biocompatibility ambony.
• Ny famolavolana bar tsy epiglottis dia manome fidirana mora sy mazava amin'ny alàlan'ny lumen.
• Tsipika zoro 5 no miseho rehefa eo amin'ny toerany fisaka ny cuff, izay afaka misoroka ny cuff hiova mandritra ny fampidirana azy.
• Ny lovia lalina ao anaty cuff dia manome tombo-kase tena tsara sy hisorohana ny sakana ateraky ny epiglottis ptosis.
• Ny fitsaboana manokana ny fonosana amin'ny cuffs dia mampihena ny fivoahan'ny rano ary mamindra tsara.
• Mety amin'ny olon-dehibe, ankizy sy zazakely.
Fonosana:5 pcs / boaty. 50 pcs / baoritra
Haben'ny boaty: 60x40x28 cm
hoe azo ampiharina
Ny vokatra dia mety amin'ny fampiasana marary izay mila fanatoranana ankapobeny sy famelomana aina vonjy taitra, na hametrahana làlambe artifisialy tsy misy famaritana maharitra ho an'ireo marary mila miaina.
Ity vokatra ity araka ny rafitra dia azo zaraina ho karazana mahazatra, karazany roa nohamafisina, karazana mahazatra, karazany efatra nohamafisina avo roa heny. Ny fantsom-panafody mahazatra, fonosana fonosana fonosana, fantsom-baravarana, manondro kitapo fiaramanidina, valizy mitambatra sy inflatable; nohamafisin'ny fantson-drivotra, mpampitohy kitapo fonosana, fantson-drivotra. Famantarana ny tsorakazo fitarihana rivotra, (tsy afaka), ary ny valantsara iraisana; karazana tsotra indroa amin'ny fantson-drivotra, fantson-drano, fonosana fonosana, fantsom-bozaka, manondro kitapom-batsy, valizy iraisana sy inflatable; fantsona roa nohamafisin'ny fantson-drivotra, fantson-drano, fonosana fonosana, fantsom-baravarana, tondroina ny airbag, ny fonon-tànana mampifandray, tehina mpitari-dalana (tsia), vongan-tsofina ary valizy fiampangana. Hamafiso sy araraoty avo roa heny ny saron-tava laryngeal amin'ny rindrin'ny trachea miaraka amin'ny vokatra tariby vy. Mba hanamafisana ny fantson-drivotra, ny fantson-drano, ny kitapo fonosana mampifandray, ny fonon-tànana mampifandray, fantsom-bozaka, fantson-drivotra dia mandray torolàlana vita amin'ny fitaovana vita amin'ny silika vita amin'ny silika. Raha tapitra ny vokatra; peratra Oxygen sterane etane oxygen, residuide oxide etilena dia tokony ho latsaky ny 10μg / g.
[Famaritana modely] jereo ny tabilao etsy ambany ：
Karazana mahazatra, karazana nohamafisina,
Ny karazana mahazatra misy fantsona roa,
Ny karazana nohamafisina amin'ny fantsona roa
Fiakaran'ny vidim-piainana (Ml)
Ny lanjan'ny marary / vatana (kg)
Ankizy10 ~ 20
Ankizy20 ~ 30
Olon-dehibe30 ~ 50
Olon-dehibe 50 ~ 70
70 ~ 100 olon-dehibe
Olon-dehibe ＞ 100
5. Ampiasao ny tanana ankavanana hitazonana ny penina mitazona ny saron-tava laryngeal, hahafahana manome, ny rantsan-tànana sy ny rantsantanana rantsan-tànana manohitra ny vatan'ny fandrakofana sy ny saron-tava fantsom-panafody, manarona ny vava mankamin'ny lalana manaraka ny sisin'ny valanorano ambany , lela miraikitra amin'ny pharyngeal LMA, mandrapahatongan'ny tsy mandroso intsony hatreto. Azonao atao koa ny mampiasa ny fomba fampidirana ny saron-tava laryngeal, manarona ny vavanao mankany amin'ny lanilaniny fotsiny, dia hapetraka ao am-bava mankany amin'ny tenda eo am-pototry ny saron-tava laryngeal, ary 180O aorian'ny fihodinana, ary avy eo manohy manindry ny saron-tava laryngeal , mandra-pahatonga azy tsy afaka manery hatreto. Rehefa mampiasa ny saron-tava laryngeal nohatsaraina na ProSeal miaraka amin'ny tehina mpitari-dalana, ny tsorakazo mpitari-dalana dia azo ampidirina ao amin'ny lavaka amin'ny rivotra hahatratrarana ny toerana voatondro, ary ny fampidirana ny laryngeal saron-tava azo esorina aorian'ny fampidirana ny saron-tava laryngeal.
7. Araka ny fiampangana nomeny fa ny fonony fonosana entona (ny habetsaky ny rivotra dia tsy mihoatra ny refy farany famenoana), ampifandraiso ny faritry ny taovam-pisefoana ary zahao raha tsara ny rivotra, toy ny rivotra na ny sakana, raha araka ny dingana ampidirina ao. saron-tava laryngeal.
9. Nosintonina ny fonon'ny tenda: ny rivotra ao ambadiky ny valin'ny rivotra misy ny syringe miaraka amin'ny syringe tsy misy fanjaitra dia alaina avy ao amin'ny fonon'ny tenda.
2. Fampitomboana tsy ara-dalàna ny marary mandeha ra amin'ny lalan-pisefoana.
3. Ny mety ho an'ireo marary misakana ny lalan-pisefoana, toy ny tenda, ny abscess, ny hematoma sns.
4. Ny marary dia tsy mety amin'ny fampiasana an'ity vokatra ity.
1. Alohan'ny fampiasana dia tokony mifototra amin'ny taona, ny lanjan'ny vatana amin'ny safidy samihafa amin'ny famaritana modely marina ary fantaro raha mitete ny kitapo.
2. Azafady zahao alohan'ny hampiasana azy, toy ny hita ao amin'ny vokatra tokana (fonosana) misy ireto fepetra manaraka ireto, ny fandrarana ny fampiasana ny:
a) vanim-potoana mahomby amin'ny sterilization;
b) Ny vokatra simba na manana vatana hafa.
3. Ny fampiasana dia tokony handinika ny asan'ny torotoro marary sy ny auscultation ny feon'ny rivotra roa tonta mba hamaritana ny vokatry ny rivotra ary hamarana ny fanaraha-maso dioksidan'ny karbaona. Toy ny fahitana fihenam-bidy an-tsokosoko na mahantra na tsy miovaova maheno ny feo mitete, dia tokony hisintona avy hatrany ny sarontava laryngeal, aorian'ny oksizenina feno aorian'ny implantation.
4. Fanamafisana ny tsindry faneriterena, ny tsindry amin'ny làlambe dia tsy tokony hihoatra ny 25cmH2O, na mora tohina na entona mankany an-kibo.
5. Ny marary manana sarontava laryngeal dia tokony hifady hanina alohan'ny hampiasana azy, mba hialana amin'ny mety hisian'ny fihenan'ny alikaola amin'ny alàlan'ny gastric mandritra ny rivotra tsindry tsara.
6. Ity vokatra ity dia sterilization oxide etilena, manan-kery mandritra ny telo taona.
7. Rehefa misondrotra ny balaonina dia tsy tokony hihoatra ny fahaizana ambony isa indrindra ny habetsahan'ny fiampangana.
8. Ity vokatra ity ho an'ny fampiasana klinika, ny fandidiana ary ny fampiasan'ny mpiasan'ny fitsaboana, aorian'ny fandringanana.
Ny vokatra dia tokony hotehirizina amin'ny hamandoana somary mihoatra ny 80%, ny mari-pana dia tsy mihoatra ny 40 degre Celsius, tsy misy gazy manimba ary efitrano madio madio tsara.
[Daty nanamboarana] Jereo ny labozia fonosana anatiny
[Daty famoahana na daty fanovana]
Daty famoahana famaritana: 30 septambra 2016
Teo aloha: Tube Tube Endotracheal miaraka amin'ny torohevitra manokana
Manaraka: Silicone Foley Catheter miaraka amin'ny Temperature Probe
Orinasa maskara laryngeal mask
mpanamboatra làlan-kaleha laryngeal
mpamatsy làlan-drivotra saron-tava laryngeal
orinasa saron-tava laryngeal
saron-tava silary laryngeal
lalan-drivotra saron-tava silary
mpanamboatra làlan-drivotra saribary silika
mpamatsy làlan-drivotra saribary silika mpamatsy
orinasa fanaovana saron-tava laryngealy